‘श्रीदेवीको मृत्यु दुर्घटना होइन, उनको हत्या भएको दावी ’ - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
प्रकाशित : बुधबार, साउन ०१, २०७६१३:३५ पब्लिक आवाज /संवाददाता
एजेन्सी। केरल प्रहरी महानिर्देशक ऋषिराज सिंहले बलिउडकी प्रसिद्ध नायिका श्रीदेवीको हत्या भएको दावी गरेका छन् । उनले श्रीदेवीको मृत्यु बाथटबमा डुबेर नभई एक हत्या भएको बताएका छन् ।
जापानी नागरिक सुमिजु तेञ्जीको रु दुई लाख बौद्धबाट लुटपाट ! सुमिजु घाइते
बुबा बन्दै छन् चर्चित नायक आर्यन सिग्देल
बधाई छ ! भ्यालेन्टाइन डेमा बिहे गर्दै बर्षा र संजोग , यस्तो छ निमन्त्रणा पत्र